Munaasabad lagu dhaqan-gelinayey Xeerka Saxaafada ee Madaxweynaha uu saxiixay oo maanta ka dhacday Mogadishu – Kalfadhi
Maanta magaalada Mogadishu waxaa lagu qabtay munaasabad lagu dhaqan-gelinayo Xeerka Saxaafada Soomaaliya ee uu saxiixay Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Labada Aqal ee Baarlamaanka ayaa sharcigan soo ansixiyay, 8-dii July sannadkii 2019-ka iyo 14 January sannadka 2020.
Sii hayaha xilka Ra’iisul Wasaaraha ahna ku xigeenka Ra’iisul Wasaaraha, Wasiirka Warfaafinta Dhaqanka iyo Dalxiiska, Wasiir ku-xigeenka Wasaarada, Xildhibaano iyo Suxufiyiin ka tirsan Warbaahinta Madaxa Banaan iyo Warbaahinta Dowlada, ayaa ka qeyb-gallay munaasabada.
Agaasimaha Guud ee Wasaarada Warfaafinta dhaqanka iyo Dalxiiska Cabdiraxmaan Yuusuf (Al Cadaala) oo ugu horeyn ka hadlay Munaasabada ayaa ka sheekeeyay Marxaladaha uu Soo Maray Xeerkan iyo ahmiyada uu u leeyahay Warbaahinta Dalka. Dhinaca kale Wasiirka Wasaarada Warfaafinta dhaqanka iyo Dalxiiska Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa sheegay inuu Xeerkani ka dhigayo Warbaahinta Dowlada mid u firay Qof waliba oo Soomaaliyeed halka ay markii hore ahayd warbaahinta Dowlada mid gudbisa Fariimaha Dowlada.
Sii hayaha xilka Ra’iisul Wasaaraha ahna ku xigeenka Ra’iisul Wasaaraha Mudane Mahdi Maxamed Guuleed Khadar ayaa ku dhawaaqay inuu Xeerku dhaqan gal yahay, isla markaasina furay Xafiiska Xiriirka Warbaahinta Madaxa Banaan iyo Dowlada Soomaaliya.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka oo warbixin ka dhageystay Guddiyada Dastuurka